Wacom dia mandefa Cintiq ho an'ny matihanina amin'ny teti-bola | Famoronana an-tserasera
Ny takelaka sary Cintiq an'i Wacom dia tsy vokatra mora vidy. Ambony ambany, dia amin'ny vidiny lafo ary izany dia mirona hampihemotra ny maro izay mitady takelaka voalohany hanombohana ny famolavolana sy ny fanaovana sary amin'ny alàlan'ity vahaolana ity.
Na dia tamin'ity indray mitoraka ity Wacom, miaraka amin'i ny Cintiq vaovao anao, te-ho manintona kokoa an'ireo tanora ireo ianao mpianatra sy kanto mamolavola izay manomboka ny diany amin'ny tontolo iray izay tsy maintsy handrafetany asa. Fitaovana manokana noho ny antony maro ary havaozina izany.
Es avy any Las Vegas any Etazonia avy any amin'ny toerana misy an'i Wacom dia nanambara kilasy fampirantiana penina vaovao. Miresaka momba ny Wacom Cintiq 16 isika, fitaovana iray tsy tonga lafatra loatra hanombohana fanaovana sary sy sary ara-teknika amin'ny lafiny rehetra.
Ity Wacom Cintiq 16 vaovao ity dia miavaka amin'ny alàlan'ny fitondrana ireo safidy rehetra tadiavina anaty monitor interaktif, na dia izany aza fisorohana ireo fiasa mandroso rehetra avy amin'ity faritra Cintiq Pro ity; ary izay azonao atao ny mahafantatra ato amin'ity lahatsoratra midadasika ity.
Tsy midika izany fa io Wacom Cintiq io koa dia safidy tsara ho an'ireo matihanina izay mitady vahaolana hafa mifanaraka amin'ny teti-bolanao, satria miresaka andiany iray isika izay amin'ny maodely sasany dia mandany 2.000 na 3.000 euro. Ity Cintiq vaovao ity dia misy amin'ny faran'ny volana janoary amin'ny vidiny 599,90 euro.
La Cintiq 16 dia miavaka amin'ny Wacom Pro Pen 2, ny haavony 8192 amin'ny fahatsapana ny tsindry, ny fankatoavana ny fitongilana, ny efijery 1920 x 1080 Full HD, ny vera henjana miaraka amin'ny fitsaboana matte ary manome ny fahatsapana tsara indrindra rehefa misarika azy io. Ary tsy tokony hohadinointsika koa ny hakanton'ny famolavolana azy sy ilay tariby 3-in-1 tsy manam-paharoa izay hahafahanao hitandrina ny latabatra fiasanao ho madio mba hametrahana ny fifantohana amin'ny famolavolana sy ny sary.
Una takelaka avo lenta izay avy amin'ny marika tsara indrindra takelaka sary amin'izao fotoana izao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » Fitaovana famolavolana » Wacom dia mandefa Cintiq vaovao vonona ho an'ny mpianatra tanora kanto sy mpamorona
Marcelo allassia dia hoy izy:
Mercedes, ho an'i Lucy!
Valiny tamin'i Marcelo Allassia